popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​) – Page2– PoPinVdo
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဘ၀ခွန်အားဖြည့် / လူမှုဘ၀No Comment on “ဖောက်ပြန်တဲ့သူကို ပစ်ထားပြီး ပိုလှအောင်နေပါ“
ဖောက်ပြန်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ ကြားကြားနေရလို့ … ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ချစ်သူ၊အိမ်ထောင်ဘက်က အခြားတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်နေပြီဆိုရင် အသဲနာပြီး ဒေါသတွေထွက်၊ အပြစ်တွေအပြန် အလှန်တင်၊ရန်ဖြစ်၊အအ်ိပ်ပျက်အစားပျက်ပြီး ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်နဲ့ သေချင်လောက်အောင် စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ကြရပါတယ်၊ အချို့ဆို ဘ၀ပျက်၊အနာဂတ်မဲ့တဲ့အထိ ဖြစ်ကြတာ တွေ့ရတယ်။ ကျမအနေနဲ့အဲဒီလို မဖြစ်ကြစေလိုပါဘူး။ အရေးကြီးတာကတော့…
ကမ္ဘာ့သမိုင်းထဲက မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဆိုသည်မှာ
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဗဟုသုတNo Comment on ကမ္ဘာ့သမိုင်းထဲက မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ဆိုသည်မှာ
ရးသားသူ – Academy Page “ မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ” ဆိုသည်မှာ ဂရိဘာသာဖြင့် “between the rivers.” ( မြစ် နှစ်သွယ်ကြားမြေ) ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည် ။ တချိန်က “မက်ဆိုပိုတေးမီးယား ”…
အင်္ဂလိပ်စကားကို မသင်ပဲတတ်နေတဲ့ ငါးနှစ်သား ကလေး
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ထူးဆန်းထွေလာ / ပညာရေးNo Comment on အင်္ဂလိပ်စကားကို မသင်ပဲတတ်နေတဲ့ ငါးနှစ်သား ကလေး
မွေးကတည်းက မသင်ပဲ ပညာရပ်တွေကိုတတ်နေတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်တို့က ပါရမီရှင်တွေလို့ ဆိုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ပါရမီရှင်တွေဟာ ရှားတော့ရှားပေမယ့် ကမ္ဘာအနှံ့မှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အဲဒီသူတွေထဲမှာ ဗီယက်နမ်က Le Le Nguyen Bao Trung ဆိုတဲ့ကောင်လေးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ငါးနှစ်သားပဲရှိသေးတဲ့ ဒီကောင်လေးဟာ…
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)မှုခင်းသတင်းNo Comment on အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မုဒိမ်းကျင့်ရာ အသက် ၇၆ နှစ်အရွယ် အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံး ဒီဖြစ်ရပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ တွင် ဖြစ်သွားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အသက် ၂၇ နှစ်အရွယ် ပွေးလေဆိုသည့် အမျိုးသမီးငယ်သည်…
ကေတီဗွီနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှားပြီဝင်လာတာထင်တယ် ငါလေ ဒေါသကို မနည်းမျိုချထားရတယ်နော ဟွင်
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ကြားရသိရသမျှNo Comment on ကေတီဗွီနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှားပြီဝင်လာတာထင်တယ် ငါလေ ဒေါသကို မနည်းမျိုချထားရတယ်နော ဟွင်
ကေတီဗွီနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှားဝင်မိတာထင်တယ် ငါလေ ဒေါသကို မနည်းမျိုချထားရတယ်နော ဟွင်း
မန်စီးတီး သို့ ဘာကြောင့် မပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ရှင်းလင်း ပြောကြား သွားခဲ့တဲ့ #ဂျော်ဂျင်ဟို
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)အားကစားNo Comment on မန်စီးတီး သို့ ဘာကြောင့် မပြောင်းရွှေ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အပေါ် ရှင်းလင်း ပြောကြား သွားခဲ့တဲ့ #ဂျော်ဂျင်ဟို
ပြီးခဲ့တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အတွင်း မှာ ဂျော်ဂျင်ဟို ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် လက်ရှိ ချန်ပီယံ မန်စီးတီး သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖို့ ရေပန်းစား ခဲ့ပေမယ့် အဆုံးမှာ ၄င်း ရဲ့ ဆရာဟောင်း မော်ရစ်ဇီယို…
BREAKING NEWS : : ရိုနယ်ဒို ဟာ သူမ ကို ငွေပေးကာ ကာမ ရယူခဲ့တယ် လို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖွင့်ဟ ပြောဆို
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)အားကစားNo Comment on BREAKING NEWS : : ရိုနယ်ဒို ဟာ သူမ ကို ငွေပေးကာ ကာမ ရယူခဲ့တယ် လို့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး ဖွင့်ဟ ပြောဆို
ပေါ် တူ ဂီ အသင်း ခေါင်း ဆောင် နဲ့ တိုက် စစ် မှုး ခ ရစ္စတီယာ နို ရို နယ် ဒို ဟာ သူမ ကို ကာမ…
မော်ရင်ဟို အတွက် အမှားမခံတော့တဲ့ပွဲ . . . ၀က်စ်ဟမ်း VS မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တတ်
September 29, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)အားကစားNo Comment on မော်ရင်ဟို အတွက် အမှားမခံတော့တဲ့ပွဲ . . . ၀က်စ်ဟမ်း VS မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တတ်
မန် ချက် စတာ ယူ နိုက် တတ် နဲ့ နည်း ပြ မော် ရင် ဟို တို့ ကတော့ ၂ ပွဲ ဆက် ရလဒ် ဆိုး တွေ…
နည်းပညာမြင့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရေပေါ်နွားခြံ
September 28, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ဗဟုသုတNo Comment on နည်းပညာမြင့် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရေပေါ်နွားခြံ
ဥရောပတိုက်က နယ်သာလန်အခြေစိုက် စားသောက်ကုန် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Belado ကတော့ ပင်လယ်ဆိပ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့၊ရိုသာဟန်မြို့မှာ ကမ္ဘာပထမဆုံးသော ရေပေါ် မွေးမြူရေးခြံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖွင့်လှစ်ဖို့ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ ကမ္ဘာမြေကြီးက ပေးအပ်ထားတဲ့ သယံဇာတတွေကို နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး မြေပြင် ကမွေးမြူရေး ခြံတစ်ခြံပမာ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဒီနည်းဟာ မျက်မှောက်ခေတ်မှာကြုံတွေ့နေ…
မမြင်ဘူးတဲ့သူများကြည့်ထားပါ တောင်သမန်အင်း ရဲ့ ရေလယ်ခေါင် ဖိုက်တင် (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
September 28, 2018 popinvdo.xyz(ပဲပင်​​ပေါက်​)ကြားရသိရသမျှNo Comment on မမြင်ဘူးတဲ့သူများကြည့်ထားပါ တောင်သမန်အင်း ရဲ့ ရေလယ်ခေါင် ဖိုက်တင် (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
မမြင်ဘူးတဲ့သူများကြည့်ထားပါ တောင်သမန်အင်း ရဲ့ ရေလယ်ခေါင် ဖိုက်တင်